भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु आवश्यकता कि विकृति
अन्नपूर्ण शुक्रवार, माघ २८, २०७३ 5671 पटक पढिएको
प्रेमको बहानामा भ्यालेन्टाइन डेलाई मात्रै बुझ्नु वा मनाइनु तर्कसंगत छैन । एक हिसाबले अहिलेको पुस्तालाई त ठीकै लाग्ला । यद्यपि जायज चाहिँ होइन । हामी नेपाली हौं । आफ्नै मौलिक संस्कार र संस्कृति छन् । मान्नुपर्ने कैयौं चाडवाड छन् । धान्नुपर्ने रीतिरिवाज छन् । हामीले टेकेको माटो नेपाली हो । हाम्रो समाज र जीवन पूर्णतया पश्चिमा भइसकेको छैन । तसर्थ आफ्ना मौलिकताहरू जोगाउनुको सट्टा विदेशी उत्सव मनाउनु आवश्यकताभन्दा बढी विकृति हो । मीनराज वसन्त, साहित्यकार
यसलाई विकृति भनिहाल्न मिल्दैन । प्रणय दिवस विभिन्न रूपमा परम्परादेखि नै मनाइँदै आए तापनि समय र परिस्थितिअनुसार यो परिमार्जित हुँदै आएको देखिन्छ । यो युवायुवतीका लागि मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन, जुनसुकै उमेरसमूहका व्यक्तिले पनि नेपाली संस्कृतिअनुसार व्यवस्थित तरिकाले मनाए यसको सार्थकता झल्कन्छ ।
विमलकुमार थापा, सञ्चारकर्मी
मोनिका लोहनी, विद्यार्थी
आफ्नो प्रेमी वा प्रेमिकाप्रति हार्दिकतापूर्वक प्रेमभाव दर्शाउन कुनै दिवस प्रतीक्षा गरिरहन जरुरी छैन । जोडीबीचको सच्चा प्रेम हरपल हरक्षण स्वतस्फूर्त रूपमा अभिव्यक्त भइरहन्छ । दिवसमा मात्र बाँडिने प्रेम त सच्चा प्रेम नभएर नाटकमात्र हो । केवल नाटक मञ्चनका लागि प्रणय दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो प्रेमका नाममा विकृतिलाई प्र श्रय दिने दिवस हो ।
कमल कोइराला, शिक्षक
माया भनेको मन भित्रबाट हुनुपर्छ । भ्यालेन्टाइन डे मनाएरमात्रै हुँदैन । त्यसैले भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चलन मलाई त्यति ठीक लाग्दैन ।
फुन्जो लामा, पर्वतारोही
भ्यालेन्टाइन डे मनाए पनि नमनाए पनि जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ प्रेम प्रकट हुन्छ । यो प्राकृतिक कुरा हो । तर अहिले भ्यालेन्टाइन डेको नाममा कुरा नबुझेकाको बीचमा प्रेमको जुन बजारीकरण हुन थालेको छ त्यसले प्रेमको अर्थ साँघुरो बनाइउने सम्भावना छ ।
राजेन मानन्धर, अनुसन्धानकर्ता
दुवै हो, यसलाई सकारात्मक हिसाबले लियो भने राम्रो हो र यसैलाई नकारात्मक हिसाबले लियो भने विकृति पनि हो । सकारात्मक यस अर्थमा कि मानिसको सम्बन्ध सधैं एकनासको हुँदैन । उतारचढावको सम्बन्धलाई जोड्ने काम यसले गर्छ र यो केवल प्रेमी र प्रेमिकाकोबीच मात्र हुँदैन । तर आजको पुस्ताले यसलाई केबल केटी र केटाबीचको मायाको दिवसको रूपमा लिन्छन् । यो दिनमा कुनै न कुनै केटीलाई प्रस्ताव राख्नुपर्छ वा घुम्न जानुपर्छ भन्ने धारणा गलत हो ।
रोमा न्यौपाने, नृत्यांगना
हामीले पश्चिमी मुलुकबाट सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बढी कुराको सिको गर्दै आएका छौं । भ्यालेन्टाइन डे पनि आज विकृतिको रूपमा फैलिँदै छ । अनावश्यक देखासिकी गरेर फूल र उपहारमा पैसा खर्च गरेर मात्रै माया हुँदैन । मायामा दुई मन मिल्नु जरुरी छ ।
रुमु न्यौपाने, कवि
माया र मित्रता मनाउने दिन भ्यालेन्टाइन डेले सम्बन्धलाई गहिरो बनाएको पाइन्छ । प्रेमी, प्रेमिका, परिवार र मित्ररूलाई फूल, कार्ड र प्रेमका सन्देशहरू दिएर माया जनाउने एउटा माध्यम बनेको हुनाले यो आजको आवश्यकता भन्न सकिन्छ । एक, दुईवटा अवगुण भए पनि विकृति नै मन लाग्दैन ।
निभा श्रेष्ठ, विद्यार्थी
मायाको मूल्य खोज्ने समयमा भ्यालेन्टाइन डेको के महत्व हैन र ? हरेक सम्बन्धलाई स्वार्थसँग तौलिनेहरूलाई प्रणय दिवस के मतलव । केबल आँखाको रमितामात्र हो ।
दिनेश खनाल, समाजसेवी
आवश्यकता विकृति दुवै होइन । यो आयातीत संस्कार हो । मानिस आधुनिक देखिन रहरभन्दा देखासिखी र करले भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् ।
शिव दाहाल, सञ्चारकर्मी
आवश्यकता नै हो । तर कसैले कसैको मन दुखाउनु हुँदैन है र माया नै गर्नु छ भने प्रेमदिवस नै कुर्न पर्दैन ।
नेपाली संस्कृति र संस्कारमा यो पर्व मनाउने चलन छैन । तर केही निश्चित वर्गमा यसले हलचल ल्याए तापनि अधिकांश क्षेत्रमा यसको केही महत्व देखिन्न ।
सुधीर ढुंगेल, कर्मचारी, प्रज्ञा भवन
भ्यालेन्टाइन डेकै कारण फूल, कार्डलगायतको व्यापार बढ्छ । यी सामग्री उपलब्ध गर्नका लागि युवापुस्ताले जसरी भए पनि पैसा जुटाउने उपाय खोज्छन् । त्यसैले यो प्रचलन त्यति राम्रो लाग्दैन ।
इन्दिरा रानामगर, बालअधिकारकर्मी
नेपाल-भारत वार्ता : पञ्चेश्वर असफल 4026
सांसद नै ठगिन्छन् ट्याक्सी चालकबाट अरूको हालत के होला? 45087
बाढी पीडितको सहयोगका लागि प्रचण्डले दिए देउवालाई चेक 786
सर्पको टोकइबाट एकको मृत्यु 194
'गोडा गुम्यो, गैंडा नगुमोस्' 1479